SEO adighi-akwụsị na saịtị gị | Martech Zone
Satọde, Febụwarị 12, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Site n'oge ruo n'oge, Highbridge nwere ohere n'ime oge anyị ji ọrụ n'aka iji nyere ụlọ ọrụ ibe anyị aka. Anyị Blog banyere ụfọdụ, nwere ha na redio ngosi, Ezubere ụfọdụ infographics maka ndị ọzọ, anyị na-enyekwa ikikere ngwanrọ (naanị anyị zipụrụ ụyọkọ maka nyocha mgbasa ozi anyị) yana ọbụlagodi ịkwalite SEO! Maka ezumike n'afọ gara aga, anyị kpebiri ime nke a maka niile nke ndị mmekọ anyị.
Otu n'ime onyinye ndị a bụ nkwado nkwado maka Agent Sauce, a ire ala na ụlọ ụlọ ọrụ. Adam na - enyere azụmahịa m aka mgbe niile - na - enyere aka na koodu na ọrụ akụrụngwa, na - akwalite anyị, ma ọ bụ naanị ịbụ enyi na - akwado ịkwado. Ọ bụ oge nkwụghachi ụgwọ! Uru nke ngwugwu a ruru $ 1,000.
Anyị lekwasịrị anya ụfọdụ blọọgụ, ụfọdụ saịtị ntinye akwụkwọ, na ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị mkpa wee gaa ọrụ na-ede nnukwu ọdịnaya ebe niile n'aha Adam. Ejirila ihe ndị na-eme ihe nkiri kachasị na ogo na ụfọdụ isiokwu - yabụ anyị lekwasịrị anya na ha. Nkwalite ahụ rụpụtara ma Adam nwere obiọma iji kesaa nsonaazụ ahụ.
Kemgbe Jenụwarị (ihe na-erughị ụbọchị 60), ndị nnọchiteanya Sauce si nchịkọta emeela mgbanwe pụtara ìhè mgbe nkwalite ahụ gasịrị:
Ọbịa gara 47%
Peeji nke dị elu 54%
Ọnụego bounce gbadara 10.5%
Oge na saịtị ejirila 37%
Nleta ọhụụ ruru 7%
Na-elele stats ndị a ọnụ, ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ niile kwagara n'ụzọ ziri ezi. N'ihi gịnị? Naanị n'ihi na etinyere saịtị gị nke ọma maka ọdịnaya ziri ezi apụtaghị na injin ọchụchọ ahụ na-ele ya anya n'ụzọ ahụ - off-site content with links back to your site is a confirm. Mgbe engines ọchụchọ na-ahụ isiokwu ndị na-ezo aka na saịtị gị, ha na-agbanye saịtị gị na ọkwa ndị ahụ.
Anyị na-ama ahịa na anyị na-arụ ọrụ na ebe n'ozuzu okporo ụzọ n'ezie shrunk… ma n'ihi na ọ ka mma ezubere iche, na-eduga na conversions n'ezie ụba. Ọ bụ maka ịnweta ndị na-ege ntị ziri ezi na saịtị gị, ọ bụghị naanị ndị na-ege ntị. Ihe ndekọ Adam na-egosi na ndị mmadụ na-anọ ogologo oge, na-ahapụ obere, na ọtụtụ n'ime ha na-abịa… nke ahụ bụ kpọmkwem ihe onye ọ bụla chọrọ ịhụ - na emeghị site na ịme ihe ọ bụla na saịtị ahụ!
Feb 13, 2011 na 7:16 PM
M na-eche na ihe Digital Home Ama n'ezie chọrọ ịhụ bụ ọzọ akwụ ụgwọ ndebanye aha maka ọrụ ha, ọ bụghị naanị ụba nleta na pageviews, wdg Olee otú na-ngbanwe na Trending na niile nke ụba okporo ụzọ? Nke ahụ ọ́ bụghị naanị ihe dị mkpa?
Feb 13, 2011 na 8:08 PM
Ajụjụ pụtara ìhè - na ekwenyere m gị 100% Paul. Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ, Adam enweghị usoro ndenye ọpụpụ na saịtị ya, a na-azụkwa njikọ aka maka ire ere. Adam mara mma nke ukwuu iji nye stats ndị a mana amabeghị ahịa ahịa n'oge a. Echere m na ọ ga-abụ ọtụtụ ọnwa ka ọ na-ebugharị ụzọ ndị a site na oghere ahịa ya.
Feb 15, 2011 n’elekere 6:29 nke abali
Paul, M ga-ekweta na ihe anyị chọrọ n'ezie bụ mma mgbanwe. Agbanyeghị na anyị nwere usoro ndenye ọpụpụ na ịntanetị (ndo Doug), ole na ole n'ime ndị ahịa anyị na-aga ụzọ ahụ. Dị ka Doug kwuru, anyị na-emepụta ụzọ site na saịtị ma na-azụlite ha ka ha na-ere. Mgbe m hụrụ okwu gị n'abalị ụnyaahụ m gafere wee lelee ụzọ ndị a na-emepụta na ahịa mezuru vs. n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. Enwere m ike ịgwa gị na anyị mepụtara ~ 40% ndị ọzọ na-eduga ma gbakwunye ~ 25% ndị ahịa karịa afọ a karịa ikpeazụ. Ọ nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe, nkwalite akụ na ụba, oge, ahịa mụbara ịbụ ọdịdị nke azụmahịa nke dị na usoro uto, wdg ... akara ala bụ na mmụba nke okporo ụzọ ziri ezi (ọ bụghị naanị anya anya) emeela ka ọ bụrụ ihe ụba ahịa. Isi ihe bụ na ọ bụ okporo ụzọ ziri ezi.